I-Elstree Escape (i-annexe yabucala, indawo yokupaka
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguEmma
ILUMKO ngenxa ye-COVID-19
1. Isihlomelo sodwa ngokupheleleyo.
2. Sivimba ixesha le-4h phakathi kweendwendwe zokucoca ngokujulile.
I-Elstree sisihlomelo esizimeleyo kwindlu yethu enendawo yokupaka ngaphandle kwendlela. Siyazamkela izilwanyana zasekhaya kunye nabantwana (nangona singaboneleli ngezinto zobungcali kwiintsana kunye nabakwishumi elivisayo banokuyifumana iyisquash!). Yimizuzu eli-10 ukuhamba ngokukhululeka ukuya kumbindi wedolophu kunye nolwandle oluhle lwaseScarborough South Bay, zonke iithiyetha kunye nezinto eziyimfuneko zolwandle.
Ikhaya elivela kwikhaya elipholileyo kwindawo yoxolo, ezolileyo kunye nokuphumla
I-Escape yi-1-bed plus en suite shower enendawo yokuhlala eyahlukileyo - isofa, ikhitshi, idesika kunye nendawo yakho yokupaka. Ungakhululeka kwaye uzimele okanye ufike elunxwemeni ukuze ufumane umoya omtsha kunye nembonakalo entle.
I'Escape' ikwisitrato sezindlu ezinkulu zeVictorian zihamba nje umgama ukusuka kumbindi wedolophu yaseScarborough. Uninzi lweevillas zisengamakhaya osapho -- ukuba uyathanda ulwakhiwo ukonwabele! Kwisangqa semayile ungafika kwi-SJ Theatre, icinema, iivenkile ezikumbindi wedolophu, ulwandle lwaseMazantsi Bay kunye ne-promenade kunye neSpa Theatre. Unokuhamba uye ePeasholm Park kunye neOpen Air Theatre kodwa ikude kancinane. Kukho umngcelele weevenkile wezinto ezisisiseko nje ekoneni (kodwa siya kuhlala siqinisekisa ukuba unobisi kunye neengxowa zeti oza kufika kuzo!). Zininzi iikhefi ezikufutshane kunye neeresityu ngaphakathi kohambo olufutshane ngoko ukuhambahamba kulula kakhulu.
Siyathemba ukuba 'uyabaleka' kuye wonke umntu kwaye oko kubandakanya nathi ... kodwa ukuba ufuna naluphi na uncedo kwindawo yendawo okanye uswele nantoni na, okanye ulibale ibrashi yakho yamazinyo siya kuzama ukukunceda.